घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » हवाई ताजा समाचार » हवाई आगन्तुकहरु को लागी नयाँ यात्रा प्रतिबन्ध
हवाई अड्डा • उड्डयन • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • सरकारी समाचार • हवाई ताजा समाचार • अतिथि सत्कार उद्योग • समाचार • मान्छे • प्रेस घोषणाहरु • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज
हवाई मा अस्पतालहरु लगभग भरिएको छ, आईसीयू बेड मुश्किल बाट उपलब्ध छन्, तर २०,००० भन्दा बढी आगन्तुकहरु अझै पनी आइपुग्छन् Aloha हरेक दिन राज्य।
एक बर्षको मौनता पछि, हवाई पर्यटन प्राधिकरण के सीईओ अब आगन्तुकहरु र बासिन्दाहरुलाई घर मा बस्न र यात्रा नगर्न आग्रह गर्दै छन्।
यो हवाई गभर्नर Ige द्वारा आज प्रतिध्वनित भएको थियो।
हवाई गभर्नर। डेविड इगेले आज हवाई बासिन्दा र आगन्तुकहरुलाई अक्टोबर २०२१ को अन्त्य सम्म सबै अनावश्यक यात्रामा ढिलाइ गर्न को लागी कोभिड -१ cases मा हालै, छिटो बृद्धि भएको कारण राज्यको स्वास्थ्य सेवा सुविधा र संसाधनहरुमाथि दबाब परेको छ।
गभर्नर इगेले शुक्रवार एक मिडिया ब्रीफिंग मा यो घोषणा गरे, "हाम्रो अस्पतालहरु क्षमता मा पुगिसकेका छन् र हाम्रो आईसीयू भरिएको छ। अब यो हवाई यात्रा गर्न को लागी एक राम्रो समय छैन।
गभर्नर इगेले थपे, "COVID को संख्या मा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखिन six देखि weeks हप्ता लाग्नेछ। यो यात्रा गर्न को लागी एक जोखिमपूर्ण समय हो। सबैजना, बासिन्दा र आगन्तुक समान, मात्र आवश्यक व्यापारिक गतिविधिहरु को लागी यात्रा कम गर्नु पर्छ।
हवाई अझै आगन्तुकहरु संग भरिएको छ। Ala Moana शपिंग सेन्टर, Waikiki, र धेरैजसो होटलहरु जस्तै शपिंग मल्ल भरिएका छन्। FLights बाहिर बेचिन्छ, तर यो धेरै चाँडै समाप्त हुन सक्छ।
पर्यटन मा सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक उद्योग हो Aloha राज्य। पर्यटन आगमन मा नयाँ प्रतिबन्धहरु यो उद्योग र अर्थव्यवस्था लाई हवाई राज्य मा पूर्ण रूपमा अपंग बनाउन सक्छ।
कोभिड -१ 1000 का १००० सम्म नयाँ केसहरु संग, अस्पतालहरु भरिएका छन्, पर्यटन अब यस पल मा दिगो छैन Aloha राज्य। हवाई र संयुक्त राज्य अमेरिका को बाकी अधिकारीहरु लाई अर्थव्यवस्था स्वास्थ्य मा राखेका थिए, र यो गल्ती अब देखाउँछ - र यो डरलाग्दो छ। हवाई एक टापु राज्य को रूप मा अझ ठूलो चुनौती छ।
जोन डी फ्राइज, अध्यक्ष, र सीईओ हवाई पर्यटन प्राधिकरण भनिएको छ कि भले ही समग्र आगन्तुक आगमन पहिले नै गिरावट शुरू भएको छ, ऐतिहासिक रूपमा गिरावट मा मामला जस्तै, आगन्तुकहरु लाई हवाई को लागी आफ्नो यात्रा स्थगित गर्न को लागी विचार गर्नु पर्छ।
"हाम्रो समुदाय, बासिन्दा, र आगन्तुक उद्योग मिलेर काम गर्न को लागी जिम्मेवार छ यो संकट लाई सम्बोधन गर्न," डी फ्राइजले भने। "त्यस्तै गरी, हामी आगन्तुकहरुलाई कडा सल्लाह दिइरहेका छौं कि अब यात्रा को लागी सही समय छैन, र उनीहरु अक्टोबर को अन्त्य सम्म आफ्नो यात्रा स्थगित गर्नु पर्छ।"
स्वास्थ्य विभाग को निर्देशक डा एलिजाबेथ चार, वर्तमान स्थिति को जरुरीता मा जोड दिए। "कोभिड मामिलाहरुको बृद्धि मुख्यतः सामुदायिक फैलावट को कारण हो, त्यसपछि बासिन्दाहरु विदेश मा हटस्पट क्षेत्रहरु लाई उडेर कोभिड लाई आफ्नो घर र समुदाय मा फिर्ता ल्याईरहेछन्," चारले भने। "यदि चीजहरु परिवर्तन भएनन्, हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीहरु अपांग हुनेछन् र ती सबै रोगहरु, चोटहरु, र हाम्रा आगन्तुकहरु सहित सबै प्रकार को रोग को लागी चिकित्सा हेरचाह को आवश्यकता छ, उनीहरुलाई तुरुन्तै आवश्यक उपचार पाउन सक्छ।"
हवाई आधारित विश्व पर्यटन नेटवर्क हवाई पर्यटन प्राधिकरण र हवाई गभर्नर Ige लाई कार्य गर्न आग्रह गरे। यो अनुरोध लाई बेवास्ता गरीयो र प्रेस प्रकाशनहरुमा प्रश्न सोध्न बाट यस प्रकाशन लाई प्रतिबन्ध लगाएर प्रतिक्रिया दिईयो।
eTurboNews भविष्यवाणी गरिएको छ कि अधिक प्रतिबन्धहरु आउँदैछन्, र यो आज पहिलो कदम हो।
यस समयमा, त्यहाँ सबै प्रमुख हवाई द्वीपहरु को लागी प्रभाव मा यात्रा प्रतिबन्धहरु छन्, Oahu, Kauai, Maui, हवाई (बिग आइल्याण्ड), Molokai, र Lanai को टापुहरु सहित।
यो पनी प्रशान्त यात्रा प्रतिबन्ध सबै यात्रीहरु को लागी हाल संयुक्त राज्य अमेरिका भित्र खोपिएको छैन को लागी आवश्यक छ।
यस समयमा, डेल्टा संस्करण को कारण स्थानीय मामलाहरु मा बृद्धि को कारण, यो भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ कि यात्रा प्रतिबन्ध पुन: स्थापित हुन सक्छ, सबै को लागी पीसीआर परीक्षण सहित। Aloha राज्य अझै पनी अनिवार्य १० दिन क्वारेन्टाइन बाट बच्न।
परीक्षण हाल गैर खोप यात्रुहरु को लागी मात्र अनिवार्य छ।
अगस्त १० मा राज्य भित्र निम्न नयाँ प्रतिबन्ध राज्यपाल Ige द्वारा आदेश दिइएको थियो।
सामाजिक जमघट १० भन्दा बढि मानिसहरु भित्र र २५ भन्दा बाहिर बाहिर सीमित हुनेछ।
रेस्टुरेन्ट बारहरु र सामाजिक प्रतिष्ठानहरु मा संरक्षकहरु संग कम से कम ft फिट को दूरी कायम राख्ने पार्टीहरु संग बस्नु पर्छ (अधिकतम १० समूह को आकार घर भित्र र २५ बाहिर संग); त्यहाँ कुनै मिलन हुने छैन, र मास्क सबै समय मा लगाउनु पर्छ जब सक्रिय रूप मा खाने वा पिउने बाहेक।
काउन्टीहरु ५० भन्दा बढी मानिसहरु को लागी सबै पेशेवर प्रायोजित घटनाहरु को लागी प्रस्तावहरु को समीक्षा गर्नेछन्, यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि सुरक्षित सुरक्षित अभ्यासहरु लाई लागू गरिनेछ। यी पेशेवर घटनाहरु को आयोजकहरु लाई सूचित गर्नु पर्छ र कार्यक्रम भन्दा पहिले निम्न काउन्टी एजेन्सीहरु संग परामर्श गर्नु पर्छ। काउन्टी अनुमोदन ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरु को लागी पेशेवर घटनाहरु को लागी आवश्यक छ।
जुर्गेन स्टेनमेट्ज, अध्यक्ष विश्व पर्यटन नेटवर्क यस घोषणा को प्रतिक्रिया मा भन्यो: म HTA अन्त मा बाहिर बोलिरहेको देख्दा खुशी छु। जाहिर छ, यो हाम्रो घर पनि हो, र यहाँ के हुन्छ यो धेरै व्यक्तिगत बनाउँछ। हामी फेरि हवाई पर्यटन प्राधिकरण हाम्रो वैश्विक नेटवर्क र १२ experts देशहरु मा विशेषज्ञहरु र नेताहरु संग समन्वय र यस खतरनाक संकट को माध्यम बाट पैतृक काम गर्न को लागी हाम्रो समर्थन को प्रस्ताव गर्दछौं।
जेन क्लाउजिंग भन्छन्:
म एक पर्यटक हुँ कि अर्को हप्ता माउ मा हुन को लागी थियो। हामी गभर्नर र मेयरहरुको अनुरोधको कारण रद्द गर्दैछौं। रद्द गर्न गाह्रो थियो किनकि यो हाम्रो ५० औं वार्षिकोत्सव को लागी थियो, तर हामी सही चीज को लागी प्रयास गर्दछौं। हाम्रो आवास प्रदायकले जे होस् हामी संग काम गर्न अस्वीकार गर्दछ (हामी $ 50५०० जफत गरीरहेका छौं सही काम गर्न को लागी)। अन्य सबै यात्रा सम्बन्धित उद्योग कम्पनीहरु हवाई भाडा सहित पूर्ण फिर्ता संग आरक्षण रद्द गर्ने प्रक्रियामा छन्। हामी प्रयोग भएको महसुस!
पूर्ण रूपमा तपाइँ शेरोन संग सहमत हुनुहुन्छ! बायाँ बाट लगातार कपट!
अगस्त २,, २०२० ० 26::2021
यसै बीच, जो बिडेन हाम्रो सीमा को ढोका कोविड सकारात्मक अवैधहरु को लागी खुल्ला स्विंग जारी छ, र तब डेल्टा भेरियन्ट को बारे मा गुनासो। यो पाखण्ड हो। यदि उनी वास्तव मा कोविड को प्रसार को बारे मा ख्याल राख्छन्, उनी मेक्सिको बाट हाम्रो सिमाना बन्द गर्दैछन्।
VT ले आफ्नो राज्य गैर आवासीयहरु लाई बन्द गर्यो, HI किन सक्दैन?